Belule isandla ekhaya labadala | News24
Belule isandla ekhaya labadala
ISITHOMBE: sithunyelweAmalunga e-A Pome Mental illness Advocacy kanye nomhlengikazi ngesikhathi evakashele ekhaya labadala.
INHLANGANO engenzi nzuzo i-A Pome Mental Illness Advocacy (A Pome) ivakashele ekhaya labadala Emuseni Old Age Home endaweni yase-Edendale ngoLwesine olwedlule mhla zingama-28 kuNhlolanja (February) nalapho befike banikela khona ngezithelo baphinde banikela ngesikhathi sabo njengoba bekhuculule bahlanza lendawo.
Le nhlangano eyasungulwa inkosazana encane yasendaweni yaseCaluza uNks Ayanda Mavundla ngokubambisana noNks Nhla Ndlovu ithi izimisele ukusiza amalunga emiphakathi eyahlukene.
UNks Ndlovu uthe lokhu kuyingxenye yohlelo lwabo abazolwenza njalo ngoLwesine ukuhambela izindawo ezahlukene bayokwelula khona isandla.
Uthe lena indlela abazama ukufinyelela ngayo emphakathini bakwazi nokuthi basize lapho bengasiza khona kwazise bayinhlangano okuhliswe ngayo ukusiza ngayo umphakathi.
“Bekungokokuqala senza lolu hlelo kodwa kusuka manje sekuzoba into esiyenza njalo ngoLwesine uma ngabe sekuzophela inyanga. Angeke size sigcine ngokuhambela amakhaya abantu abadala kuphela kodwa sizobe sihambela izindawo ezahlukene okubalwa kuzona nezindawo lapho kuhlala khona izintandane. Kungumsebenzi njengenhlangano ukusiza umphakathi senze noshintsho,” kubeka yena.